Wasiirka Maaliyada Somaliland Iyo Wefdi Uu Hogaaminayo Oo Booqasho Ku Tegey Djibouti | Araweelo News Network (Archive) -
Djibouti(ANN)Wefti uu hoggaaminayo Wasiirka Wasaarada Maaliyada Somaliland Eng, Maxamed Xaashi Cilmi ayaa maanta booqasho dhawr maalmood qaadanay ku tegey wadanka Djibouti ka dib markii ay marti qaad ka heleen wasaarada maaliyada ee dalka Djibouti. sida ay
u sheegeen saxaafada markii ay ka degeen madaarka Djibouti.
Weftigaa oo galabta ka degey Djibouti waxa madaarka ku qaabilay Wasiirul dawlaha wasaarada maaliyada Djibouti u qaabilsan Miisaaniyadda Cali Siciid iyo Cabdi Ashkir oo ka mid ah saraakiisha wasaarada maaliyada.
Ujeedada safarka wefdiga uu hogaaminayo wasiirka maaliyada Somaliland ayaan si rasmi ah loo ogayn, balse Eng. Maxamed Xaashi Cilmi oo markii uu gaadhay Djibouti madaarka ugu waramayay Saxaafadda ayaa sheegay in socdaalkoodu qaadan doono muddo sadex maalmood ah isla markaana ay kulamo kala duwan la yeelan doonaan Wasaaradaha dalka Djibouti. Laakiin ma sheegin waxyaabaha ay ka wada hadlayaan ee u qorshaysan.
Eng, Xaashi ayaa ku tilmaamay socdaalkooda mid ka dhashay marti qaad rasmi ah oo ay ka heleen dawlada Djibouti. Weftiga Wasiirka Maaliyada waxa xubno ka ah Wasiirka Ganacsiga, Warshadaha iyo dalxiiska C/risaaq Khaliif Axmed iyo sarkaal ka socday Rugta Ganacsiga Somaliland.
Wuxuuna wasiirka warshadaha iyo dalxiiska C/risaaq Khaliif Axmed, uga mahad celiyay masuuliyiinta wasaarada maaliyada Djibouti ee soo dhaweeyay, isagoo sheegay in socdaalkoodu qeyb ka yahay iskaashiga labada dale e walaalaha ah.